सागमा कराँतेले सर्वाधिक स्वर्ण जित्नेछ – दावा गुरुङ (अन्तरवार्ता) - Khelpati
सागमा कराँतेले सर्वाधिक स्वर्ण जित्नेछ – दावा गुरुङ (अन्तरवार्ता)
बिहिवार, जेठ २३, २०७६ गिता राई
नेपाली खेलकुदमा कराँते खेलको गौरबमय ईतिहास छ । घरेलु खेलमा राजनीतिको सिकार नहुन्जेल अन्तराष्ट्रिय एरिनामा कराँतेले हासिल गरेका सफलता लोभलाग्दो नै छ । दक्षिण एसियाली खेलकुदमा धेरै पदक ल्याउने खेलको रुपमा रहेको कराँते पछिल्लो समय आन्तरिक विवादले थिलोथिलो अवस्थामा पुगेको छ । विवादकै कारण कराँतले पछिल्लो सागमा सफलता जनाउने अवसरनै पाएन ।
स्वार्थ केन्द्रित राजनीति र ब्यक्ति केन्द्रित स्वार्थको दलदलमा विभाजित कराँतेले त्यसबाट उम्कने प्रयास खोजिरहेको छ । यसै साता कराँतेका लागि एक सुखद खबर प्राप्त भयो । ललितपुरको सातदोबाटोमा कराँतेको आफ्नै एकेडेमी भवनको उद्घाटन गरियो । करिब ६ बर्ष अघि सुरु भएको भवन निर्माण केही काम अझै बाँकीनै छन् । तर बुधबार खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्माले कराँते एकेडेमी भवनको उद्घाटन गरे ।
यसअघिका सदस्य सचिव युवराज लामा आफै कराँतेका खेलाडी थिए । उनले कराँते खेलको ईतिहासमा एक महत्वपुर्ण कामको थालना गरे । बुधबार उद्घाटन भएको एकेडेमी उनै लामाको परिकल्पना थियो ।
कराँतेले अब भने आफ्नै अभ्यास गर्ने मुख्य भवन पाएको छन् । खुल्ला रुपमा अभ्यास र प्रतियोगिता गर्दै आएको कराँतेले आफ्नै एकेडेमी सहितको हल पाएको छ ।
नवनिर्मित भवनले कराँते खेलको विकासमा कस्तो प्रकारको टेवा पुग्छ त ?
यिनै बिषयमा खेलपाटीकर्मी गीता राईले नेपाल कराँते महासंघका सह–अध्यक्ष दावा गुरुङसंग कुराकानी गरेकी छिन् ।
कराँतेको एकेडेमी निर्माण गर्नुको उद्वेश्य के हो, यसको परिकल्पना कसरी भयो ?
यो पूर्व सदस्यसचिव युवराज लामाको परिकल्पना हो । उहाँको योजना आज आएर साकार भएको छ । उहाँले नै यो भवन बनाउन सुरुवात र परिकल्पना गर्नुभएको हो । कराँतेले अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा ईतिहास रच्दै आएको छ । त्यसलाई निरन्तरता दिन र बचाउन एकेडेमी भवन निर्माण गरिएको छ ।
यसको निर्माणमा कसले सहयोग गरेको हो ?
भवनको परिकल्पना कराँते महासंघले गरेको हो । यसको निर्माण राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेपले गरेको हो ।
भवनको लागत खर्च कति हो ?
जानकारी अनुसार करिब ८ करोड खर्च भएको छ ।
भवन निर्माणको काम नसकिदै उद्घाटन गरिएको छ, के कारणले होला ?
भवन त बनिसक्यो । अलिकति सुविधाको कमी छ । बाँकी काम चाँडै नै सकिनेछ ।
खेलाडीले अब बर्षभरीनै प्रशिक्षण गर्न सक्छन त ?
सहज रुपमा खेलाडीले बाह्रै महिना प्रशिक्षण गर्न मिल्ने वातावरण बनेको छ ।
कराँतेको आफ्नै भवन बनेको छ । कराते खेलको विकासमा कत्तिको सहयोग पुग्ला ?
यो भवन निर्माणले कराँते खेलको विकासमा ठुलो टेवा पुग्छ । अब प्राकृतिक रुपमा अवरोधको सामना गर्न पर्दैन । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा कराँतले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुनेछ ।
भवनको निर्माणपछि खेलाडीलाई के–कस्तो सुविधा हुन्छ ?
भवनमा होस्टेल पनि भएका कारण खेलाडीलाई बाहिर बस्नुपर्दैन । क्याम्पमा बस्ने खेलाडी एउटा कोठामा ४ जना बस्न सक्छन् । यहाँ हरेक चिजको सुविधा छ । खानाका लागि मात्र बाहिर जाने हो । चाँडै त्यसको व्यवस्था गर्नेछौ । राष्ट्रिय टिम र राष्ट्रिय क्याम्पमा बस्नेले होस्टेलमा निशुल्क बस्न पाउनेछन् । राष्ट्रिय टिमको क्याम्पमा नरहने खेलाडीले न्युन शुल्क तिरेर बस्न पाउनेछन् ।
दक्षिण एसियाली खेलकुदमा कराँते धेरै पदक ल्याउने खेलमा पर्छ । भवनको निर्माणसँगै अब नेपालमा हुने साफमा कराँतेबाट कति पदकको आशा गर्न सकिन्छ ?
पहिला १६ इभेन्ट थियो, अहिले १९ इभेन्ट छ । पहिले हामीले १६ वटा इभेन्टमा १४ वटा स्वर्ण, एउटा रजत, एउटा कास्य ल्याएका थियौ । मलाई विश्वास छ, यसपटक १९ वटा इभेन्टमा कम्तिमा १७ वटा स्वर्ण हामीले ल्याउने छौ ।
‘प्रदेश खेलकुद अघि र केन्द्र पछि जस्तो भो’
'बलिया टिमसँग नेपालले मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्नुपर्छ'
हरेक निर्णयमा आईसीसीको भर पर्नुपरेको छ – क्यान अध्यक्ष (अन्तरवार्ता)
बार्सिलोनाविरुद्ध अदालत जान सक्दिन : मेस्सी (अन्तरवार्ता)
एक कार्यकाल सोच्न सक्छु - रमेश सिलवाल (अन्तरवार्ता)
विधेयकले खेलकुद क्षेत्रका सबै समस्या हल गर्छ – मन्त्री विश्वकर्मा (अन्तरवार्ता)
बुद्ध क्रिकेट क्लबको जित
मैत्रीपूर्णमा रौतहटको महिला टोलि विजयी
इंग्ल्यान्ड १ सय १२ रनमा अलआउट
एनभीए क्लब भलिबल लिग चैतमा
हाप्किडोको राष्ट्रिय च्याम्पियसिप बैशाखमा